Ginea - Wikipedia
Sainam-pirenen' i Ginea
Sarin-tanin' i Ginea
Sarintany maneho an' i Ginea ao Afrika
I Ginea dia firenena ao Afrika Andrefana, izay manana morontsiraka ao amin' ny Ranomasimbe Atlantika, izay manana velaran-tany mirefy 245 857 km². Niisa 12 877 894 ny mponina ao tamin' ny taona 2021. Antsoina koa hoe Ginea-Kônakry izy mba hanavahana azy amin' i Ginea-Bisao. I Conakry no renivohiny.
Misy vondrom-poko efatra lehibe ny vahoaka gineana, dia ny Mandinge, ny Peola, ny Soso ary ny Vahoakan' ny Ala. Miozolmana ny ankamaroan' ny Gineana (84,4 %), manaraka izany ny Kristiana (10,9 %), any aoriana ny mpanaraka ny fivavaham-bahoaka (2,4 %). Ny fiteny frantsay no fiteny ôfisialy ao Ginea nefa ny fiteny malinke, peola, soso, kisy, basary, lôma, kôniagy ary kpele dia fitenim-pirenena.
Mpamboly sy mpiompy ny 90 %n' ny ponina ao Ginea nefa tsy ampy ho an' ny fahavitan-tena ara-tsakafo izany. Manana loharanon-karena an-kibon' ny tany betsaka i Ginea, ka lohalaharana amin' izany ny baoksita. Mipoitra avy ao Ginea ny loharanon' ny ony lehibe sasany ao Afrika Andrefana, toa an' i Gambia sy i Niger.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ginea&oldid=1040793"